खुल्लामञ्चका सटर हटाएपछि प्रधानमन्त्रीसँग पूर्व रक्षामन्त्री किन भए खुशी ? – Pahilo Page
खुल्लामञ्चका सटर हटाएपछि प्रधानमन्त्रीसँग पूर्व रक्षामन्त्री किन भए खुशी ?
१४ बैशाख २०७६, शनिबार २१:३९ 456 पटक हेरिएको
काठमाडौं, १४ बैशाख । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्व रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधानले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कडा निर्देशन दिएकोले खुल्लामञ्चका सटर हटाइएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई धन्यवाद दिएका छन् ।
शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको विशेष साक्षात्कारमा बोल्दै नेता प्रधानले यस्तो बताएका हुन् । खुल्लामञ्चको सटर हटाउनको लागि प्रधानमन्त्री ओलीको साथै पत्रकार ऋषि धमलाको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहेको प्रधानको भनाई छ । उनले भने, ‘‘म सम्पूर्ण मिडियालाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु । खासगरी रिपोर्टर्स क्लब नेपाल, जसले यो विषयको पर्दाफास गरेको हो । यहीँबाट सुरु भएको अभियानले आज सार्थकता पाएको छ ।’’
बैशाखभित्रमा टुँडिखेलको अतिक्रमित जग्गा खालि नभएको भए आफूहरुले जेठ १५ गतेदेखि सशक्त आन्दोलन गर्ने योजना बुनिसकेको पनि प्रधानले स्मरण गराए । यद्यपि प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालै निर्देशन दिएर खुल्लामञ्चका सटर भत्काउन लगाएको भन्दै उनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पुनः धन्यवाद दिए ।
त्यस्तै, उनले इतिहासमै मिडियाले छ्यापछ्याप्ती गरेर समाचार छापेको पनि यही टुँडिखेलको जग्गा प्रकरण भएको जिकिर गरे । उनले भने, ‘‘सार्वजनिक सम्पत्ति जोगाउन सबै लाग्नुपर्छ । भूमाफियाहरुलाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ ।’’ कुनै दल विशेषको नभई जनताको प्रतिनिधि भएर यस्तो गलत कार्यको विरोध गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो । ‘भ्यु–टावर’बाट सुरु भएको माफियाकरण खुल्लामञ्चसम्म पुगेको नेता प्रधानको आरोप छ ।
फरक प्रसँगमा उनले नेपालको इतिहासमै अहिलेसम्मको बलियो सरकार भएपनि वर्तमान सरकारले काम गर्ने अवसर गुमाएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘‘यो सरकार अहिले काण्डैकाण्डमा मुछिएको छ ।’’